ဖြေရှင်းချက်အပူ & အေး - ။ ပစ္စည်းကိရိယာများပူးတွဲချွေတာဂွမ်ဒေါင်း Itene စွမ်းအင်, Ltd
အပူစုပ်စက်အပူ & အေး
အပူ & အအေးခံခြင်းဖြေရှင်းနည်း
ရေကူးကန် & Spa ဖြေရှင်းချက်
တစ်ဦးကသမားရိုးကျ HVAC system ကိုတစ်ဦးမီးဖိုနှင့်လေအေးပေးစက်နှစ်ဦးစလုံးပါရှိသည်။ အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, မီးဖိုအိမ်ပူနွေးလာသည်နှင့်နွေရာသီအတွက်, လေအေးစက်ကြောင့်အေး။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်အိမ်မှာထိန်းသိမ်းထားဖို့မြျှောလငျ့သူ Utah အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်, ဒီသမားရိုးကျ setup ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အပူပန့်များရာသီပေါ် မူတည်. အပူသို့မဟုတ်အအေးတစ်ခုခု functions တွေပေးတစ်ခုတည်းကရိယာဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာဒီအပူဖြေရှင်းချက်မှာကြည့်ခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့် Eco-သတိအိမ်ပိုင်ရှင်အကြားထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
အပူ pump ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ
အပူစုပ်စက်၏အသုံးအများဆုံးစတိုင်တစ်ခု Air-source ကိုအပူစုပ်စက်ဟုခေါ်သည်။ ဤရွေ့ကားယူနစ်သောအင်အားကြီးသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်လေအေးပေးစက်ဆင်တူတဲ့အအေးသံသရာကနေတဆင့်လည်ပတ်။ နွေရာသီမှာတော့အပူသင့်အိမ်အတွင်းရှိလေထုထဲကနေကိုစုဝေးစေနှင့်သင့်အိမ်ချွတ်အေး, အပြင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး။ အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, အပူဟာပြင်ပလေထုထဲကနေကိုစုဝေးစေနှင့်သင့်အိမ်သို့သှားကွ၏။ သင်တစ်ဦး switch ကိုလှန်လှောကြည့်ခြင်းဖြင့်အအေးမှအပူကနေအပူစုပ်စက်၏ညှနျကွားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဘူမိအပူအပူပန့်များ Air-source ကိုအပူပန့်များနှင့်တူတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားပြင်ပလေထုနှင့်အတူလဲလှယ်အပူထက်, သူတို့ကရေသို့မဟုတ်တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာသယ်ကြောင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပိုက်တစ်စီးရီးမှတဆင့်မြေပြင်အောက်ကမြေဆီလွှာများနှင့်အတူလေကြောင်းရန်ဖလှယ်။ ဘူမိအပူပန့်များအများအပြားအိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေစဉ်, သူတို့တစ်တွေအိမ်ပြန်ပြီးသား built ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကတပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲကြသည်။ ပိုပြီးထိရောက်တစ်ခုခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက်ရှိအပူစနစ်များကိုအစားထိုးရန်ရှာနေသူများသည် Air-source ကိုအပူပန့်များထည့်သွင်းစဉ်းစားပယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အပူ pump ၏ကောင်းကျိုးများ
သမားရိုးကျမီးဖိုထဲကိုအုပ်စိုးအပူစုပ်စက်၏အဓိကအားသာချက်ကအပူ generate မှလောင်စာလောင်ကျွမ်းပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ တစ်ဦးကအပူစုပ်စက်မဟုတ်ဘဲအပူကိုဖန်တီးရန်လောင်စာဆီကိုမီးရှို့ခြင်းထက်အပူရွှေ့ဖို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်စွမ်းအင်ချွေတာသိသိသာသာရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လျှပ်စစ်မီးထိုကဲ့သို့သောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသို့မဟုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ပါဝါအဖြစ်အစိမ်းရောင်အရင်းအမြစ်မှရရှိသောလျှင်တစ်အပူစုပ်စက်လည်ပတ်ဖွယ်ရှိကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့လောင်စာဆီနှင့်လွှတ်ပေးဓာတ်ငွေ့လောင်ကျွမ်းစေတဲ့မီးဖို operating ထက်ပိုမိုစိမ်းလန်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အပူစုပ်စက်နှင့်အတူတစ်ဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံယိုစိမ့်မရှိအန္တရာယ်လည်းရှိတယ်။
ယနေ့အပူမကြာခဏသူတို့တစ် ပို. ပင် Eco-friendly HVAC ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်တစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမော်ဂျူးပေါင်းစပ်ဖို့လွယ်ကူရှိပါတယ်ဆိုလိုတာက "နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အဆင်သင့်" လာညှစ်ထုတ်လိုက်။ အပူပန့်များက "အစိမ်းရောင်" ရွေးချယ်မှုစဉ်းစားနေကြသည်သောကြောင့်သင်တဦးတည်းကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ပါက, သင်ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အခွန်မက်လုံးအတှကျအရထိုက်ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အပူပန့်များထုတ်လုပ်သူနည်းပညာစုံလင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုရတာလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းစနစ်များကိုဖန်တီးရန်အချိန်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါ 1940 ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြပြီ။ ခေတ်သစ်အပူပန့်များ, အ harshest ပြင်ပအခြေအနေများကိုဆီးတားနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်အပူထိန်းကိရိယာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နှင့်တိတ်တဆိတ်လုပ်ကိုင်ရန်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။
ဆောငျးရာသီကာလ၏အအေးဆုံးတွင်အပူစုပ်စက်ကိုထိရောက်စွာသင့်အိမ်အပူမှအိမ်ပြင်ကနေလုံလောက်အောင်အပူကိုစုသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခေတ်သစ်အပူပန့်များယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်သည့်အခါအပူ generate မှအပေါ်ကိုလှန်သောလျှပ်စစ်အပူပေးကွိုင်မဆံ့။ သို့သော်အချို့ Utah အိမ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးစွမ်းအင်ထိရောက်ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အပူပန့်များတွဲဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ။ မီးဖိုထဲကအပူစုပ်စက်က၎င်း၏လျှပ်စစ်အပူကွိုင်အသုံးချဖို့မပါဘဲတက်စောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးတဲ့အခါမှသာအိမ်အပူ, backup တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်သီးခြားမီးဖိုနှင့်လေအေးပေးစက်ရှိခြင်းပြီးနောက်အပူစုပ်စက်မှကိုကျော်ပြောင်းလဲနေတဲ့နေတယ်ဆိုရင်, သင့် HVAC ကန်ထရိုက်တာဒီပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်အတွက်သင့်အိမ်ရှိပြွန်အလုပ်တချို့ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့လိုပေမည်။ ဒါကအပူစုပ်စက်မှကိုကျော်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်သွင်းပေမည်။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတန်ဖိုးထားသောသူတို့အဘို့, Air-source ကို အပူပန့်များ တို့သည်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာစဉ်းစားရန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များမှာ, သင်၏ HVAC နည်းပညာရှင်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
နေရပ်လိပ်စာ: Itene စက်မှုပန်းခြံ, NO ။ 251 Shatian ရိပ်သာလမ်း, Shatianzhen Dongguan, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 0769 89873078
အဆိုပါ 39 Euroheat & Power ကကွန်ဂရက်